Nepal Auto | विश्वको पहिलो अटो शो कहिले ?
विश्वको पहिलो अटो शो कहिले ? 29 Bhadra, 2075
नेपालमा पनि करिब–करिब एक–एक वर्षमा अटो शो भइरहेको छ । अटो शोमा पस्ने जोकोही पाहुनाको मनमा प्रश्न उठ्न सक्छ, ‘संसारको पहिलो अटो शो कहिले भएको थियो होला ?’ अटोभन्दा पनि समग्र अटोमोबाइल बुझिन्छ । समग्र अटोमोबाइलभन्दा पहिले कारको प्रदर्शनी भएको हो । त्यसैले ‘पहिलो कार शो आखिर कहिले भएको थियो ?’
हो, यो प्रश्नको उत्तर भेटिएको छैन । अहिलेसम्म खोजकै विषय भएको छ । कसैलाई थाहा छैन । कुरा कारको निर्माणसँग जोडिएर आउँछ ।
तेल (ग्यासोलिन) ले चल्ने विश्वको पहिलो कार सन् १८८६ जनवरी २९ मा जर्मनीमा बनाइएको थियो । कार्ल बेन्जले बनाएको यो कारमा इलेक्ट्रिक इग्निसन, कार्बुरेटर, स्टेयरिङ ह्वील र पानीले चिस्याउने रेडिएटर थियो । बेन्जले थप अनुसन्धान गरी सन् १८८८ मा थप तीन वटा सवारी–साधनहरु बनाएका थिए । उनकी श्रीमती बर्थाले तीमध्येको एउटा कार म्यान्ह्याम भन्ने ठाउँबाट ८५ किलोमिटर हाँकेर फर्जह्याम पुर्‍याएकी थिइन । त्यो कार नै महिलाले हाँकेको पहिलो कार भएको थियो ।
कार अर्थात् शुरुको हिसाबमा अटोमोबाइलको जन्मबारे तथ्य जसरी स्पष्ट छन्, ‘कार शो’ वा ‘अटो शो’बारे इतिहास स्पष्ट छैन । जे छ, त्यो अपुरो छ ।
अहिलेसम्म फेला परेको इतिहासअनुसार सन् १८९४ डिसेम्बर ११ मा फ्रान्सको पेरिसमा पहिलो अटो शो भएको थियो । उक्त शो ‘एक्स्पोजिसन इन्टरनेसनल एक्जिबिसन भेलोसिपिडी एन्ड लोकोमोसन अटोमोबाइल’ थियो । त्यसबेला बनेका चारवटा अटोमोबाइलहरु प्रदर्शनीमा राखिएका थिए । यो प्रदर्शनी बीसौं शताब्दी शुरु हुने बेला परेकाले इतिहास ओझेलमा पर्‍यो ।
यो तथ्यलाई टक्कर दिंदै अर्को एउटा तथ्य पनि बाहिर आएको छ । भनिन्छ, सन् १९०० को हाराहारीमा अमेरिकी शहर न्युयोर्कको म्याडिसन स्क्वायर गार्डनमा स्थानिय वासिन्दाले पहिलो कार शो गरेका थिए । यो प्रदर्शनी सन् १८९५ को अमेरिकी चाड ‘थ्याङ्सगिभिङ’ मा आयोजना गरिएको ‘हर्सलेस क्यारिज’ (सवारी–साधनको दौड) को पाँच वर्षपछि भएको थियो । ‘थ्याङ्सगिभिङ’ को यो दौडमा फ्र्याङ्क डुर्यीयाले आफ्नै दाजु चाल्र्सलाई जितेका थिए । त्यसबेलाका साधन एक घन्टामा ७.३ माइल दौडेका थिए र सिकागोको भित्री भागबाट एलेनोय राज्यको इभान्स्टन पुगेका थिए ।
त्यसपछिका कुरा गर्ने हो भने सन् १९०७ मा डेट्रोयटमा र सन् १९१५ फेब्रुअरी १६–२१ मा अमेरिकाको मिसिगन राज्यको ज्याक्सनमा कार शो भएको थियो । त्यसमा आर्गो, सेभ्रोले, मुन्रो, ब्रिस्को, ओभरल्यान्ड (विलिस), हड्सन, डज, बुइक, रिओ, किङ नाइट सिलिन्डर आदि गरी २१ थरीका सवारी–साधनहरु थिए । एकजना दूरदर्शी व्यवसायी जेपी फ्लेमिङले वैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्ने सवारी–साधन ‘डेट्रोयट इलेक्ट्रिक’ पनि ल्याएका थिए ।
यसरी बीसौं शताब्दी शुरु भएपछि र यसको मध्य पुग्दा अमेरिकामा अटो शो हुन थालेका थिए । त्यसपछि यो लहर संसारभर फैलियो ।
(कोइराला हाल अमेरिकामा नेपाली न्युजलेटर ‘अक्षरिका’ को सम्पादन गर्छन् ।)
अटो शोमा यामाहा आर १५ भी ३.० : पहिलो पटक नेपालमा
यी हुन् अटो शोमा भएका इलेक्ट्रिक कार